Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zeMartinique Breaking » IMartinique iyavala, ixelela abakhenkethi ukuba bahambe
Airlines • isikhululo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Caribbean • Ukubambisa • Iindaba zaseFransi ezaphulayo • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zeMartinique Breaking • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
I-Prefecture yaseMartinique icebise ukuba abakhenkethi abasesichengeni nabangagonyelwanga bangaqhubeki nokuhlala.
Amanyathelo amatsha amkelwe liPhondo laseMartinique ngoMvulo we-9 ka-Agasti.
IMartinique ibhengeze ukhuseleko oluqinisiweyo ukuqala ngoLwesibini, nge-10 ka-Agasti, ngo-7: 00 ngokuhlwa.
Igunya lezoKhenketho eMartinique licacisile ukuba iimeko zococeko azisahlangani ukuhlala kwiimeko ezifanelekileyo.
Amanyathelo amatsha amkelwe liPhondo laseMartinique ngoMvulo we-9 ka-Agasti, eqinisekisa ukuqiniswa eMartinique kangangesithuba seeveki ezi-3, ukuqala ngoLwesibini, nge-10 ka-Agasti, ngo-7: 00 pm
Ukujonga imeko, i Indawo yaseMartinique Ucebise ukuba abakhenkethi abasesichengeni nabangagonyelwanga bangaqhubeki nokuhlala.
The IGunya lezoKhenketho eMartinique Ucacisile ukuba iimeko zococeko azisahlangani ukuhlala kwiimeko ezifanelekileyo.
Nangona kunjalo, indawo yokuhlala ayizukuvalwa ngokolawulo ngeli xesha lokutshixiza. Abatyeleli ke ngoko baya kuba nexesha ukuba banqwenela ukuqaphela ukuba mabenze ntoni, ngelixa bethobela amanyathelo ezempilo amatsha asebenzayo. Igunya lezoKhenketho eMartinique liyahlanganiswa ukuze liphendule kwizicelo zolwazi kunye nokubonelela ngoncedo lokuhamba kwabo kwesi siqithi.
Iihotele kunye neqonga lokurenta ngeholide zibonelela ngokuguquguqukayo, ngaphandle kweendleko zokurhoxiswa kunye nemigaqo yokurhoxisa eyenzelwe le ngxaki. Ukongeza, iinqwelomoya ezine eziphambili ezisebenzayo Martinique ngalo mzuzu (iAir France, iAir Caraïbes, iCorsair kunye neMoya yaseBelgium) bahlaziye izicwangciso zabo zenqwelomoya zokunceda abakhenkethi baseFrance nabaseBelgium balungiselele ukuhamba kwabo kwiintsuku ezizayo. I-Air Caraïbes iya kubonelela ukuya kuthi ga kathathu ngokujikeleza ngosuku phakathi kweFort-de-France neParis.
Kwicala lomoya wase-France, iinqwelomoya ezintathu ngosuku ziya kuqhutywa ngo-Agasti 11 kunye no-12 ukusuka eFort-de-France, emva koko iindiza ezimbini ngosuku ukusuka nge-13 ukuya kwi-15 ka-Agasti ukusukela ngoLwesithathu, inqwelomoya esetyenziswa yinkampani iya kuba nendawo umthamo (ukuya kuthi ga kwi-160 abakhweli abongezelelweyo). Ukongeza, bonke abakhweli ukubuyela kwabo kwakucwangciselwe u-Agasti 22 kwaye banqwenela ukubuyela eFrance ngaphambi kwe-15 ka-Agasti, baya kuba nakho ukuphinda bakwenze usuku lwabo lokuhamba ngaphandle kwendleko.
Malunga nokuhamba kwe-US ukuya nokubuya Martinique, Iinqwelo moya zaseMelika zilindeleke ukuba ziphinde ziqhubeke ngenqwelomoya ukusuka eMiami ukuya eFort-de-France ekuqaleni kukaNovemba walo nyaka.
UDea Malli uthi:
Agasti 14, 2021 kwi-06: 59
IMartinique yenze ukhetho olugqwesileyo apha, njengoko esi sifo sithembisa ukuba siza kuba side kakhulu ngaphandle kokuba ugonyo lwenziwe ngokukhawuleza.
ICovid-19 iya kuqhubeka nokuvelisa iiyantlukwano ezintsha (ngoku yiDelta kunye neLambda) ngaphandle kokuba singalinciphisa kakhulu inani losulelo. Uninzi lwabantu alunalo nofifi lokuba lude kangakanani usulelo lobhubhane olusuka kwisibetho se-bubonic ukuya phambili. Babasuse kakhulu abantu babo ngexesha labo lokuzonwabisa, kodwa baqhubeka nokubulala abantu naphina apho bafumana khona iminyaka engama-200 kwaye ngamanye amaxesha nangaphezulu.
Gcina iMartinique ikhuselekile. Sisiqithi esihle kakhulu!